अखण्ड सुदुरपश्चिम र काठमाडौँ
Aakar May 03, 2012
अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग गर्दै सुदुरपश्चिममा आन्दोलन चर्केको हप्ता दिन हुनलागिसकेकोछ । अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग हुँदै गर्दा, थरुहटको माग गर्दै अर्को समूह थारु संयुक्त संघर्ष समिति पनि आन्दोलनमा उत्रिएकोछ । सुदुरपश्चिम बन्दको चपेटामा परेको, हप्ता दिन भइसक्यो तर खै, अहिलेसम्म कुनै पक्षबाट समाधानको पहल वा वार्ताको पहल गरिएको थाहा छैन । उता जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा पनि आमहड्ताल आह्वान गरिएकोछ । साना साना जातीय समूहरुले आफ्ना पकड क्षेत्र मानेका ठाउँहरुमा पनि बन्द र विरोध गरिरहेकाछन्, आजैपनि बाहुन क्षेत्री लगायतका व्यक्रिहरुले पोखरामा जातिय संघियताको विरोधमा ठूलो सङ्ख्यामा सडकमा ओर्लिएर जनप्रदर्शन गरेछन् । सुदुरपश्चिममा आमहड्ताल चलिरहँदा, झडप र मुठभेडको खतरा बढिरहँदा, दिनहुँ विशाल जनप्रदर्शन भइरहँदा, काठमाडौँमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुराले नेताहरुलाई तताएकोछ ।
देश संघियतामा जाने भएकोछ, तर राजनैतिक दलहरुको अदुरदर्शिता र सस्तो लोकप्रियताको लागि बाँडेको जातिय संघियताको नाराले जनताहरु विच आपसमा मुठभेडको जोखिम बढ्दै गएकोछ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त त्यहाँ कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्ने र गाउँमा मुठभेड हुन थालेमा स्थानीय प्रशासनले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिइसकेकाछन् । अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौँमा रहेका सभासदहरु पनि विभाजन भएकाछन्, केही सभासद अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा छन् र केही सभासद विपक्षमा छन् तर समस्या समाधानको लागि कुनै अग्रसरता भने देखाएकाछैनन् । आज त अखण्ड सुदुरपश्चिमका पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरुले विपक्षमा रहेका सभासदहरुका पुतला दहन गरेछन् । यसैगरि दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा आन्दोलन चर्काउँदै लाने हो भने, झडप धेरै टाढा छैन, शान्तिपुर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने तरखरमा छ भन्दा फरक नपर्ला ।
काठमाडौँले बाहिरको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन भन्ने कुरा त यही सुदुरपश्चिममा चर्किएको आन्दोलन प्रति सरकार र सम्बन्धित पक्षहरुको उदासिनताले पनि प्रस्ट पारेकोछ । यदि सुदुरपश्चिममा निस्किएको जमात काठमाडौँमा निस्केको भए, अनि हप्तादिन आमहड्ताल गरेको भए, हरेक पार्टि, संघ र संगठनले अहिलेसम्म धेरै चासो दिइसक्थे, सायद समस्या समाधानको पहल पनि गर्थे होलान् तर विडम्वना काठमाडौँ बन्द छैन । उसो त रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पनि सुदुरपश्चिमको बन्द र हड्तालले प्रमुख स्थान पाउन सकेको छैन, राष्ट्रिय मुलधारका मिडियामा पनि सँधैको झैँ त्यही सरकारको वरिपरि घुमेकोछ । बन्द छ त तराईका भुभागहरु, अनि काठमाडौँमा सरकार र राजनैतिक दलहरु आफ्नो सरकारको नयाँ समिकरण मिलाउन व्यस्त छन् । संविधान तोकिएकै समयमा जारी हुने नहुने भन्न सकिने स्थिति छैन, सरकार कसले बनाउने, कसरी बनाउने, मन्त्रिपरिषद विघटन गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने, आदि इत्यादि कुराहरुमै राजनैतिक दलहरु व्यस्तछन् । यदि सुदुरपश्चिममा हिंसा भड्कियो, भने दोषी को? हप्ता दिन बन्द भइसक्दा पनि कसैले समस्या समाधानको पहल नगर्नुले, सम्बन्धित पक्षहरु गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ ।
सरकार कसरी बनाउने,पुनर्गठन गर्ने कि विघटन गर्ने भन्दा पनि राज्यहरु कसरी विभाजन गर्ने, संघियता कस्तो हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरु निचोडमा पुग्न जरुरी छ । साता दिनसम्म बन्द र हड्ताल हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा काठमाडौँले भोगेकोछ तर पनि यो भन्दा नमज्जा लागिरहेकोछ कि, सुदुर पश्चिमको समस्याको समाधानको लागि काठमाडौँले कुनै चासो देखाएकोछैन । सुदुरपश्चिममा केही नराम्रो भइहालेमा विभिन्न जातजाती विच सल्किएको जातिय संघियताको आगोले उग्ररुप लिन र जातिय सद्भाव विथोलिन कुनै समय लाग्नेछैन । अत: दलहरु, नागरिक समाज, सरकार, र अन्य सम्बन्धित पक्षले जातिय सद्भाव खल्बलिन नदिन, सुदुरपश्चिमको समस्या चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्न जरुरी छ ।
बन्द नगरी कुनै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो देशमा प्रमाणित भइसकेको कुरा नै हो । तर हप्तौँ दिन बन्द हुँदा पनि सम्बन्धित पक्षले मागको सुनवाइ गरेन भने, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आउनसक्छ । बन्दले सबैलाई हानी गरिरहेकोछ, अत बन्दको विरोधमा अर्को समूह निस्केर विरोध गर्नथाल्यो भने पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ । अत: सुदुरपश्चिम लगायत देशभरि उठिरहेका आवाजहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
Psthapa07 August 1, 2012 at 11:38 AM
great post! thank you for the update
Durga P. Dhungana August 1, 2012 at 11:38 AM
surely my fren is stuck in nepalgunj due to the bandh
सामाजिक सञ्जालमा हिजोआज के कस्ता कुरा भइरहेकाछन्? हामीले सामाजिक सञ्जालको उपयोग वा दुरुपयोग, के गरिरहेका छौँ? सामाजिक सञ्जालमा 'असामाजिक' पो भइएको छ कि? पढ्नुहोस् गुन्जन खनालको विचार । गुन्जन, जर्मनीमा उच्च शिक्षा लिंदैछन्, उनलाई ट्विटरमा @Gckhanal फलो गर्न सकिन्छ।​ इन्टरनेटमा नग्न तस्विरहरू हुन्छन् भनेर सन् २००० मा सुनेको थिएँ, बस् त्यही उत्सुकता थियो। नारायणगढमा पनि इन्टरनेट क्याफे सुरु भए। महँगो, साँघुरो - सबै तिरबाट बारेको "देसी बाबा डट कम" (पोर्न साइट) को लागि पर्फेक्ट ! तर मैले २००४ पछि बल्ल अलि अलि इन्टरनेट चलाउन थालेँ, इमेल गर्न थाले। तर इन्टरनेटको खास उपयोगिता २००७ मा विश्वविद्यालय खोज्न थाले पछि मात्र बुझेको हो। त्यसपछि इन्टरनेट यौन, व्यंग्य, ज्ञान, धर्म, नक्सा, इतिहास, विज्ञान आदि नसिकेका वा अनुत्तरित प्रश्नहरूको उत्तर भएर आयो। इन्टरनेटले मेरो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनायो, मलाई नयाँ मान्छे बनायो।
संगै सुरु भयो फेसबुक र ट्विटर लगायतका अनेक सामाजिक सञ्जाल। इन्टरनेटको एउटा व्यस्त थलो तर धेरैको लागि सम्पूर्ण इन्टरनेट! अन्ना हजारेको आन्दोलन, विवेकशिल पार्टीको उ…